Etu esi gbanyụọ ozi olu nke ekwentị gị | Gam akporosis
Etu esi kwụsị ozi olu
Francisco Ruiz | | Ndị ọrụ ekwentị, Nkuzi
N’isiokwu na-esonụ dị ka enyemaka, m ga-egosi gị ụzọ ziri ezi iji kwụpụ ozi olu na ekwentị gị, ihe ọ bụla akara ma ọ bụ ihe nlereanya nke otu ihe ahụ yana ụlọ ọrụ nke ị nwetara ọrụ olu na data.
Ọzọ, ma e wezụga ịkụziri ha usoro ịgbaso gbanyụọ ozi olu kpamkpam Dabere na ụlọ ọrụ nke ị nyere ọrụ ahụ, m ga-akụzikwara gị koodu dị mkpa iji tinye na keyboard nke ekwentị anyị, iji nweta gbanyụọ ozi olu na-ezughị ezu ma dịka ọdịmma onwe anyị na mkpa anyị si dị.
1 Etu esi agbanyụọ ozi olu nke Smartphone gị, rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ niile
2 Etu ị ga-esi kwụsị ozi olu nke Smartphone gị n'ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ị nọ
2.1 Etu esi gbanyụọ ozi olu Movistar
2.2 Etu esi kwụsị ozi olu Yoigo
2.3 Esi gbanyụọ ozi olu Vodafone
2.4 Etu esi gbanyụọ ozi olu ozi oroma
2.5 Etu esi gbanyụọ ozi olu Jazztel
2.6 Etu esi gbanyụọ ozi olu maka igwe okwu onO
2.7 Etu esi gbanyụọ ozi olu Pepephone na ọnọdụ
2.8 Etu esi gbanyụọ ozi olu na Amena / Mint
2.9 Gbanyụọ ozi olu na Simyo
2.10 Gbanyụọ ozi email karịa
Etu esi agbanyụọ ozi olu nke Smartphone gị, rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ niile
Lọ ọrụ ọ bụla ị bụ, ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ gbanyụọ ozi olu na ama gị kpamkpamIhe ikwesiri ime bu imeghe ekwenti ekwentị gi ma pinye koodu ndia: ## 002 # ma pịa bọtịnụ oku.
Na nke a ị ga-akpaghị aka na-enweta a ngosi na ihuenyo nke ị ga-adọ aka ná ntị na ozi olu nke ekwentị mkpanaaka gị arụ ọrụ kpam kpam n'ọnọdụ niile.
Etu ị ga-esi kwụsị ozi olu nke Smartphone gị n'ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ị nọ
Etu esi gbanyụọ ozi olu Movistar
Ọ bụrụ na ị bụ ihe ị chọrọ bụ deactivate ozi olu nke Movistar, Telefónica España, Koodu ndi elebara anya dika ihe masiri gi si di:
Gbanyụọ ozi olu mgbe ị na-ajụ oku: call na-akpọ 22537 ma họrọ nọmba 1
Gbanyụọ ozi olu mgbe ekwentị na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ jụ oku: kpọọ 22537 ma họrọ nhọrọ 2.
Deactivate ozi olu maka oku azaghị ma ọ bụ azaghị: Oku 22537 ma họrọ nhọrọ 3.
Gbanyụọ ozi olu mgbe agbanyụrụ ma ọ bụ pụọ na mkpuchi: ị na-akpọ 22537 ma họrọ nhọrọ 4.
Gbanyụọ igbe akwụkwọ ozi Movistar kpamkpam: kpọọ 22537 ma họrọ nhọrọ 5.
Etu esi kwụsị ozi olu Yoigo
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ gbanyụọ ozi olu Yoigo Dabere na ọnọdụ ndị na-ebilite, naanị ị ga-abanye koodu nke kachasị mma maka ọdịmma gị na ekwentị mkpanaka gị:
Gbanyụọ igbe ozi Yoigo mgbe gị na oku ọzọ na-arụ ọrụ: pịnye koodu ahụ na dialer * 67 * 556 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ igbe ozi Yoigo mgbe ekwentị kwụsịrị ma ọ bụ site na nso: type pịnye koodu ahụ na dialer * 62 * 556 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi olu Yoigo maka oku azaghị ma ọ bụ mgbe ị na-azaghị oku: ịpinye koodu ahụ na dialer * 61 * 556 # + bọtịnụ oku.
Esi gbanyụọ ozi olu Vodafone
Ọ bụrụ na ịchọrọ deactivate Vodafone ozi olu dabere na ọnọdụ gị, n'adịghị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ, na Vodafone enwebeghị m ike ịchọta koodu ọ bụla maka njikọ nke ahaziri nke ozi ozi olu ha, naanị koodu maka naanị gbanyụọ ozi olu Vodafone kpamkpam:
Kwụsị Vodafone ozi olu ozi kpamkpam: ị pịnyere na dialer koodu ahụ * 147 # wee pịa bọtịnụ oku.
Iji kwụsị ya dị ka mmasị gị ma ọ bụ dabere na ọnọdụ na-amasị gị, ị ga-abanye My Vodafone o kpọọ ndị ahịa ahịa Vodafone na nọmba 123.
Etu esi gbanyụọ ozi olu ozi oroma
para gbanyụọ ozi olu ozi oroma Koodu ndị ị ga-echebara iji kpọọ site na ekwentị gị bụ ihe ndị a:
Gbanyụọ ozi oliv oroma mgbe ị na-aza oku ọzọ: ## 67 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi olu olu oroma mgbe ị na-apụ ma ọ bụ na mkpuchi: ## 62 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi ụda olu oroma maka oku azaghị ma ọ bụ azaghị: ## 61 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ Oroma Ozi olu kpamkpam: ## 002 # + bọtịnụ oku.
Etu esi gbanyụọ ozi olu Jazztel
para deactivate ozi olu Jazztel ndị a bụ koodu ị ga-echebara:
Gbanyụọ ozi olu Jazztel mgbe ị na-aza oku ọzọ: ## 67 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi olu Jazztel mgbe ịnọghị ma ọ bụ na enweghị mkpuchi: ## 62 # + bọtịnụ oku.
Deactivate ozi olu Jazztel maka oku azaghị ma ọ bụ azaghị: ## 61 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi olu Jazztel kpamkpam: ## 002 # + bọtịnụ oku.
Etu esi gbanyụọ ozi olu maka igwe okwu onO
Ọ bụrụ n ’ihe ịchọrọ bụ ime ka igbe ozi dị na ekwentị gị ONO kwụsị, naanị ozi m chọtara bụ otu esi eme ya gbanyụọ ozi olu olu ONO kpamkpam, maka nke a, ị ga-emepe emepe ekwentị gị ma pịnye koodu ahụ ## 004 # ma pịa bọtịnụ oku.
Etu esi gbanyụọ ozi olu Pepephone na ọnọdụ
para deactivate ozi olu Pepehone na onodu Anyị ga-abanye koodu ndị a na dialer nke ekwentị anyị:
Gbanyụọ igbe akwụkwọ ozi Pepephone ma ọ bụrụ na ịnọ na oku ọzọ na-arụ ọrụ: ị pịnyere koodu ahụ na dialer * 67 * 556 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ igbe akwụkwọ ozi Pepephone ma ọ bụrụ na ekwentị agbanyụ ma ọ bụ na mkpuchi: type pịnye koodu ahụ na dialer * 62 * 556 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi olu Pepehone na oku azaghị ma ọ bụ mgbe ị na-azaghị oku: ị pịnyere koodu na dialer * 61 * 556 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ igbe akwụkwọ ozi Pepephone kpamkpam: ## 002 # + bọtịnụ oku.
Etu esi gbanyụọ ozi olu na Amena / Mint
para deactivate ozi olu na Amena / Mint conditionally ma ọ bụ mkpokọta, ndị a bụ koodu ị ga-echebara:
Deactivate Amena / Mint voicemail mgbe ị na-aza oku ọzọ: ## 67 # + bọtịnụ oku.
Deactivate Amena / Mint voicemail mgbe ị na-apụ ma ọ bụ na mkpuchi: ## 62 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi olu Amena / Mint maka oku azaghị ma ọ bụ azaghị: ## 61 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi olu Amena / Mint kpamkpam: ## 002 # + bọtịnụ oku.
Gbanyụọ ozi olu na Simyo
para gbanyụọ ozi olu olu Simyo n'ọnọdụ ụfọdụ Ga-etinye koodu ndị a na mpempe akwụkwọ mkpanaka gị:
Deactivating igbe akwụkwọ ozi Simyo maka mgbe ị nọ na oku ọzọ: ## 67 # + kpọọ.
Gbanyụọ igbe ozi Simyo maka mgbe ekwentị gbanyụrụ ma ọ bụ na mkpuchi: ## 62 # `+ kpọọ.
Gbanyụọ igbe akwụkwọ ozi Simyo maka oku azaghị: ## 61 # + kpọọ.
Gbanyụọ igbe ozi Simyo kpamkpam: ## 002 # + kpọọ.
Gbanyụọ ozi email karịa
para deactivate More More igbe akwụkwọ ozi dịGa-emepe emepe gam akporo gị ma pịnye koodu ndị a dịka ọdịmma gị si dị:
Deactivate the More Mobile igbe akwụkwọ ozi ma ọ bụrụ na ị bụ na oku na-aga ọzọ: ## 67 # + kpọọ.
Deactivate More Mobile mailbox ma ọ bụrụ na mkpanaka agbanyụrụ ma ọ bụ na mkpuchi: ## 62 # `+ kpọọ.
Deactivate More More igbe akwụkwọ ozi dị maka oku efu: ## 61 # + kpọọ.
Deactivate the More Mobile igbe akwụkwọ ozi kpamkpam: ## 002 # + kpọọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi kwụsị ozi olu
Asọmpi dị ugbu a na Clash Royale gbakwunyere ebe ọhụụ na kaadị 4 ọhụrụ